Ny orinasanay - Shineon Technology Co., Ltd.
ShineOn dia mpamatsy fonosana LED manerantany sy mpamatsy vahaolana maodely ho an'ny jiro sy tsena fampisehoana. Niorina tamin'ny Janoary 2010. Natsangan'ny ekipa manam-pahaizana momba ny indostrian'ny optoelektronika manana traikefa amin'ny orinasa teknolojia avo lenta any Etazonia. Ny ShineOn dia tohanan'ny orinasa amerikana malaza sy renivohitra sinoa malaza, ao anatin'izany ny GSR ventures, Northern Light Venture Capital, IDG-Accel Partners ary Mayfield, ary tohanan'ny governemanta monisipaly Beijing ihany koa.
ShineOn dia manangana fonosana sy maodera LED mitarika an'izao tontolo izao ho an'ny fampisehoana avo lenta, hazavana TV gamut miloko marevaka ary loharanom-pahazavana azo antoka sy avo lenta. SMD, COB, fonosana CSP ary modely tafiditra ao anaty mpamily DOB no nampiasain'ny mpanjifa fahitalavitra sy jiro ankapobeny.
ShineOn dia nahazo mari-pankasitrahana avy amin'ny CNAS sy EPA ho an'ny laboratoara LM-80. Nampihatra ny rafitra MES sy ERP efa mandroso ao amin'ny tsipika famokarana ary nametraka rafitra fitantanana kalitao henjana. Ny vinan'ny orinasa dia ny hanome ny mpanjifa vahaolana mifaninana sy ny vokatra azo atokisana indrindra ary ny fanomezana lanja ny mpanjifany.
ShineOn dia nekena ho orinasa Global Clean-tech 100 an'ny taona 2011, ary nahazo ny loka 2013 Red Herring Global 100. Izy io koa dia nantsoina ho orinasa Deloitte Top 50 Haingam-pandeha haingam-pandeha haingam-pandeha any Shina.
Taorian'ny firoboroboana haingana, mba hahatratrarana ny filan'ny tsena mitaky fitaovana sy modules optoelektronika avo lenta, "Shineon (Nanchang) Technology Co., Ltd." dia naorina tamin'ny Oktobra 2017 tao Nanchang. Manararaotra ny r & D any Beijing sy ny fanatontoloana isika, ampiarahina amin'ireo tombony eo amin'ny faritra sy indostrialy any Nanchang, hanafaingana ny fivelarana amin'ny ambaratonga famokarana fitaovana fonosana optoelektronika avo lenta sy singa maodely, hihaonana amin'ny fangatahan'ny mpanjifa eto an-toerana sy avy any ivelany ho an'ny vokatra avo lenta an'ny ShineOn.
Shineon - marika mpamokatra fonosana sy modules malaza eran'izao tontolo izao.
Manaova fahaizana manokana ho an'ny fitadiavanao.
10 taona tsy mitsaha-mitombo ny traikefa amin'ny fonosana LED sy indostrian'ny modules.